Vantany vao navotsotra: 18 ny lalao famaranana ho an'ny WTM World Responsible Tour Awards 2018
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vantany vao navotsotra: 18 ny lalao famaranana ho an'ny WTM World Responsible Tour Awards 2018
Nampahafantarina ireo finaliste 18 ho an'ny WTM World Responsible Awards ho an'ny taona 2018, izay mandrakotra ny zava-drehetra manomboka amin'ny orinasam-pizahan-tany iraisam-pirenena, toerana itodiana ary ONG, hatrany amin'ny tokantrano tokana.
Ireo 18 finalist ho an'ny 2018 Loka lehibe momba ny fizahantany tompon'andraikitra amin'ny WTM efa nambara, manarona ny zava-drehetra manomboka amin'ny orinasa fitsangatsanganana iraisam-pirenena, toerana itodiana ary ONG, hatrany amin'ny tokantrano tokana. Avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izy ireo, manomboka any Sri Lanka sy India ka hatrany Espana, Afrika atsimo, UK ary Etazonia. Ny sasany miasa manerantany, ny sasany kosa manolo-tena amin'ny faritra misy azy ireo. Samy mizara fanoloran-tena amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany araka izay azo atao.
Momba ny tsenan'ny dia an'izao tontolo izao
Tsenan'ny dia an'izao tontolo izao (WTM) portfolio dia misy hetsika B2B enina mitarika manerana ny kaontinanta efatra, izay miteraka $ 7 miliara amin'ny fifanarahana indostrialy. Ireto ny hetsika:
WTM London, ny hetsika manerantany ho an'ny indostrian'ny dia, dia ny fampirantiana mandritra ny telo andro ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany. Manodidina ny 50,000 ny matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, ny minisitry ny governemanta ary ny haino aman-jery iraisam-pirenena mitsidika ny ExCeL London isaky ny volana Novambra, izay miteraka fifanarahana indostrialy mitentina £ 3.1 miliara. http://london.wtm.com/. Hetsika manaraka: 5-7 Novambra 2018 - Londres.
Mandrosoa dia hetsika teknolojia fitsangatsanganana vaovao iaraha-miasa miaraka amin'ny WTM London 2018 sy ampahany amin'ny portfolio an'ny hetsika WTM. Ny fandaharana voalohany momba ny Travel Forward, fampirantiana ary programa ho an'ny mpividy dia hatao amin'ny 5-7 Novambra 2018 ao amin'ny ExCeL London, izay mampiseho ny teknolojia ho an'ny fitsangatsanganana sy fandraisana vahiny. http://travelforward.wtm.com/.
WTM Amerika Latina mahasarika mpitantana ambony eo amin'ny 9,000 ary mamorona orinasa vaovao mitentina 374 tapitrisa dolara amerikana. Natao tao Sao Paulo, Brezila, ity fampisehoana ity dia nahasarika mpihaino manerantany hihaona sy hamolavola ny làlan'ny indostrian'ny fizahan-tany. Mpitsidika tsy manam-paharoa mihoatra ny 8,000 no manatrika ny hetsika amin'ny tambajotra, mifampiraharaha ary mahita ny vaovao farany momba ny indostria. http://latinamerica.wtm.com/. Hetsika manaraka: 2-4 aprily 2019 - Sao Paulo.
WTM Africa natomboka tamin'ny 2014 tany Cape Town, Afrika Atsimo. Manodidina ny 5,000 ireo matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany manatrika ny tsenan'ny fizahan-tany miditra sy ivelany ary ny fizahantany fizahan-tany. WTM Africa dia manolotra fifangaroana mpividy mpampiantrano, haino aman-jery, fanendrena efa voatendry mialoha, tambajotra eo an-toerana, fampisehoana hariva ary mpitsidika mpivarotra dia. http://africa.wtm.com/. Hetsika manaraka: 10-12 aprily 2019 - Cape Town.
Tsena fitsangatsanganana arabo no hetsika fitetezam-paritra iraisan'ny fizahantany sy fizahan-tany any Moyen Orient ho an'ireo matihanina amin'ny fizahantany miditra sy ivelany. Ny ATM 2018 dia nahasarika olona matihanina indostrialy efa ho 40,000, miaraka amin'ny solontena avy amin'ny firenena 141 tao anatin'ny efatra andro. Ny fanontana faha-25 an'ny ATM dia nampiranty orinasa fampiratiana mihoatra ny 2,500 manerana ny efitrano 12 ao amin'ny Dubai World Trade Center. Raha te hahalala bebe kokoa dia tsidiho azafady: www.batravelvelveletwt.com. Hetsika manaraka: 28th 1-aprilystMey 2019 - Dubai.
Momba ny fampirantiana bararata
Fampirantiana bararata dia orinasa lehibe indrindra manerantany, manatsara ny herin'ny mifanatrika amin'ny alàlan'ny angona sy fitaovana nomerika amin'ny hetsika 500 mahery isan-taona, any amin'ny firenena 43 mahery, izay mahasarika mpandray anjara fito tapitrisa. Ny hetsika Reed dia tanterahina any Amerika, Eropa, Azia Pasifika ary Afrika ary karakarain'ny birao mpiasan'ny 41. Reed Exhibitions dia manolotra sehatra indostrialy 43 miaraka amina hetsika ara-barotra sy ho an'ny mpanjifa. Izy io dia ao amin'ny RELX Group plc, mpamatsy vahaolana manerantany momba ny mpanjifa matihanina manerana ny indostria.
Momba ny fampiratiana Reed Travel
Fampirantiana fitsangatsanganana reed no mpikarakara ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany miaraka amin'ny portfolio mitombo 22 mahery amin'ny hetsika fivarotana fizahan-tany sy fizahan-tany any Eropa, Amerika, Azia, Moyen Orient ary Afrika. Ny hetsika ataonay dia mpitarika tsena amin'ny sehatra misy azy ireo, na hetsika fivarotana fialamboly manerantany sy isam-paritra, na hetsika manokana ho an'ny fivoriana, famporisihana, fihaonambe, indostrian'ny hetsika (MICE), fitsangatsanganana ara-barotra, dia lavitra, teknolojia fitsangatsanganana ary koa golf, spa ary fitsangatsanganana an-tsambo. Manana traikefa mihoatra ny 35 taona izahay amin'ny fikarakarana fampirantiana momba ny dia an'izao tontolo izao.
Tamin'ity taona ity dia nisy sokajy dimy azon'ny olona nangatahana: tsara indrindra amin'ny fifampiresahana fizahan-tany tompon'andraikitra, tsara indrindra amin'ny toetry ny asa, tsara indrindra ho an'ny tombontsoa ara-toekarena eo an-toerana, tsara indrindra ho an'ny fiainana an-tany, ary farany tsara indrindra hitantanana fahombiazana - izay mitady toeran-kaleha mifanaraka tsara amin'ny fitakiana ny Overtourism. Ireo finaliste 18 ho an'ny taona 2018 dia;
Làlana Ivory Ivory Afrikana, Limpopo, Afrika Atsimo
Associacio Marques de Pastor. El Cinque LlAC, Catalunya, Espana
Barcelona, ​​Catalunya, Espana
Ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana sy fampandrosoana, manerantany
Vondrona tsy mataho-tody, Global
Madi a Thavha, Limpopo, Afrika Atsimo
Mother Ivey's Bay Holiday Park, UK
National Trust, Irlandy Avaratra
Taranaka iray, Etazonia
Rethink Orphanages, manerantany
Fiarovana ny bibidia any Sri Lanka
Wildlife ACT, Afrika Atsimo
Fiarovana ny biby manerantany, manerantany
Ireo loka dia hatolotra ao amin'ny WTM London amin'ny WTM World Responsible Tourism Day, Alarobia 7 Novambra, izay hanambarana ireo mpandresy volamena sy Silver amin'ny sokajy dimy. Mpanolotra ny BBC Tanya Beckett Hanadihady ireo mpandresy volamena momba ny orinasany sy ny hetsika efa nekena tamin'izy ireo koa.
"Ny fahatongavana ho Finalist amin'ny WTM World Responsible Tourism Awards dia zava-bita lehibe, manamarika anao amin'ny maha-mpitarika ny fizahan-tany tompon'andraikitra; miantsoroka andraikitra amin'ny fampiharana ny fitarihana izany, "hoy ny filohan'ny mpitsara Harold Goodwin. "Ny tanjonay amin'ny fikarakarana ny loka dia tsy niova hatramin'ny nanombohana azy ireo tamin'ny 2004 - te hamporisika ny fanovana eo amin'ny sehatry ny indostria izahay, hizaha ho fankasitrahana ireo izay mandray andraikitra ary afaka manaporofo fa misy fiatraikany tsara manatsara ny fizahan-tany. ”